जीतपुरमा गाडी नै ढाक्ने फ्लेक्ससहित एमाले र लोसपाको प्रचार, निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उलंघन, होला कार्वाही ? - Everest Dainik - News from Nepal
जीतपुरमा गाडी नै ढाक्ने फ्लेक्ससहित एमाले र लोसपाको प्रचार, निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उलंघन, होला कार्वाही ?
त्यसैगरी एमालेका उमेदवारहरुले गाडी नै ढाक्ने गरी
लेक्स व्यानर प्रदर्शन गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । एमालेका तर्फबाट वडा नं. ७ का अध्यक्षका उमेदवार सुनिल गुप्ताले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन हुने गरी प्रचार गरेका हुन् ।
यस्तो लेखेको छ आचारसंहितामा